Si toos ah & Cut Wire waa nooc ka mid ah silig warega kaas oo dadku adeegsado dhismaha, farsamada gacanta ama isticmaalka maalin kasta. Waxaa laga gooyaa laga yaabaa in tirada gaar ah ka dib markii lagu toosan. Si toos ah & Cut Wire Waxyaabaha: silig Black annealed, silig koronto galvanized, silig kulul-maquufin galvanized, copper dahaarka leh silig, PVCcoated silig, silig rinji, iwm si toos ah & Cut Wire Feature: Waxay badbaadin kartaa saacadood, waqti, wax cayriin shaqada, iyo haboon gaadiidka iyo wax ku ool ah. Si toos ah & Cut Wire Specificat ...
Min.Order Tirada: 5 Ton / metrik
Supply Kartida: 10 Ton / metrik halkii Day
Si toos ah & Cut Wire waa nooc ka mid ah silig warega kaas oo dadku adeegsado dhismaha, farsamada gacanta ama isticmaalka maalin kasta. Waxaa laga gooyaa laga yaabaa in tirada gaar ah ka dib markii lagu toosan.
Si toos ah & Cut Wire Waxyaabaha: silig Black annealed, silig koronto galvanized, silig kulul-maquufin galvanized, copper dahaarka leh silig, PVCcoated silig, silig rinji, iwm
si toos ah & Cut Wire Feature:
Waxay badbaadin kartaa saacadood, waqti, wax cayriin shaqada, iyo haboon gaadiidka iyo wax ku ool ah.
Si toos ah & Cut Wire sooc:
faahfaahinta Standard ee xarigga si toos ah cut: eeg Wire 8 # -23 # (dhexroor silig ka 0.6mm si 4.5mm) halka dhererka ku kala duwan yihiin sida ay baahida macaamiisheena '.
Si toos ah & Cut Wire Codsiga:
silig cut toosan loo isticmaalo qabanaya ilaa qalabka dhismaha ama waxyaabo kale. Silig cut toosan laga sameeyey oo silig galin galvanized, silig annealed madow, silig ahama, PVC silig toosan markaas googooyaa of dhererka kala duwan sidaad u baahan yahay.
Previous: U Nooca Wire
Next: PVC Wire dahaarka
Wire toosan gooyaa
U Nooca Wire